जुस सेवन स्वास्थ्यवर्धक हो त ? | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली जुस सेवन स्वास्थ्यवर्धक हो त ?
on: २२ पुष २०७५, आईतवार १९:३४ स्वास्थ्य र जीवनशैली
पुस २२, काठमाडौं (अस) । ताजा फलफूलबाट निकालिएको जुस पौष्टिक आहारको अभिन्न हिस्सा नै बनेको छ । यो प्रवृत्ति विशेषतः अति व्यस्त, स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताहरुमा बढी पाइन्छ । हुन त समय अभाव भएको बेला फलफूल ताछेर, टुक्रा–टुक्रा गरेर चपाएर खानु भन्दा त त्यसको जुस बनाएर खाँदा समय पनि बच्यो, शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्व पनि मिल्यो । फलफूलको जुसले तौल घटाउने र शरीरमा रहेका विषाक्त तत्वहरुलाई हटाउने अर्थात् डिटक्सको काम पनि गर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । हामीले शरिरलाई चाहिने तत्वहरु जुसबाट पाउँछौं त ? यसले शरीरको ब्लड सुगर र इन्सुलिनको स्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हरेक प्रकारको फलमा फ्रुक्टोज (फलफूल र जुसमा पाइने प्राकृतिक चिनी) पाइन्छ । दैनिक रुपमा शरीरलाई चाहिने क्यालोरीभन्दा बढी भएन भने फ्रुक्टोजले शरीरमा कुनै हानी गर्दैन । फलमा हुने फाइबरमा चिनीका कोषहरु रहन्छन् । शरीर भित्र गएपछि पाचन प्र्रणालीले कोषहरु टुक्राउन र फ्रुक्टोज रगतमा घुल्न समय लाग्छ ।
तर जब हामी फलको रस खान्छौं, फलमा भएका फाइबर हटेर रसमात्र बाँकी रहन्छ । यसमा फ्रुक्टोज र केही भिटामिन भने हुन्छ । यो शरीरमा जाने बित्तिकै रगतमा घुलिहाल्छ र रगतमा चिनीको मात्रा अचानक बढ्छ । चिनीको मात्रा नियन्त्रित गर्न प्यानक्रियाजले इन्सुलिन निकाल्छ । यो प्रक्रिया लगातार बढ्दै जाँदा दोस्रो प्रकारको मधुमेह विकास हुने जोखिम बढ्छ ।
सन् १९८६ देखि सन् २००९ को बीचमा एक लाख मानिसमाझ भएको एक अनुसन्धानले पनि नियमित रुपमा फलफूलको जुस खाने मानिस र दोस्रो खालको मधुमेहबीच सिधा सम्बन्ध भेटिएको थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य अनुसन्धान पनि भएका छन् । तरकारीको जुसमा भने फलफूलको जुसको तुलनामा कम चिनी हुने भएकोले यो बढी पौष्टिक हुने पाइएको छ ।
तर यसमा पनि शरीरलाई अत्यावश्यक फाइबर भने हुँदैन । फाइबर धेरै हुने खानेकुराले हृदयघात, उच्च रक्त चाप र मधुमेह लगायत मुटुसम्बन्धी अन्य रोगहरु लाग्ने जोखिम कम गर्ने पाइएको छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि वयस्कहरुलाई दैनिक ३० ग्राम भन्दा धेरै एडेड सुगर नखान सल्लाह दिएको छ । यो भनेको १ सय ५० मिलि फलको जुस बराबर हो ।
फलफूलका जुस बढी मात्रामा सेवन गर्दा मोटोपन बढ्ने कयौं अध्ययनले देखाएका छन् । जुसमा हुने फ्रुक्टोजको मात्रा बढ्दा शरीरले आवश्यकताभन्दा धेरै क्यालोरी पाउँछ । फलको रस मात्रै भएको जुसभन्दा बिया र बोक्राबाहेक सबै फल प्रयोग गरेर बनाइएको जुस खाँदा रगतमा चिनीको मात्र कम बढेको पनि पाइएको छ । एजेन्सी